New Day Jobs Blog | Expert Ideas & Insights
Career blogs-Learning | New Day Jobs
Blog Workplace Success
6 Principles for Remote Work - 18 months later
As it has been 18 months since COVID disrupted our working lives, we’ve now had time ...
Career Advice Workplace Success Personal Upgrade
Anger Management For Workplace
Nanda Win MyintDigital Marketing Executiveလုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဒေါသကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်မလဲ?&nbsp;ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝမှာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အခါတို့ ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါတို့ဆိုရင် အော်ဟစ်တာတို့ တစ်ယောက်တည်း သီးသန့်နေနေတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်မှာ အဲ့ဒီလိုမျိုးပြုမူရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းကိုကော ဆက်ဆံရေးပိုင်းကိုပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ အခက်မသင့်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုပါ ထိခိုက်လာစေနိုင်ပါတယ်။အလုပ်မှာ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တယ် ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးက ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ဆိုတာကလည်း ခက်ခဲတဲ့အရာပါပဲ။ မနေ့သစ်က သူငယ်ချင်းတို့ကို အလုပ်မှာ စိတ်တိုတာတို့ စိတ်ဖိစီးမှုများတာတို့ဖြစ်ရင် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။(၁) အခြေအနေကနေ ခဏဖယ်ရှားမယ်ကိုယ်က စိတ်တိုလာပြီလို့ခံစားမိလိုက်ရင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေကနေ ခဏနားလိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်အေးအောင်လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါပေမယ့် စိတ်တိုတိုနဲ့ ထထွက်သွားတာမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်က အေးအေးဆေးဆေးပြောတာဖြစ်ဖြစ် အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး စိတ်လျော့တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လိုက်ပါ။ ဒေါသအလျောက်လုပ်လိုက်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်မကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက် ဒေါသဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမျိုးမလုပ်ပဲ လက်ရှိအခြေအနေကနေ ခဏဖယ်ရှားပြီး စိတ်အေးအေးစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။(၂) အဲ့ဒီအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ကို ခဏဖြေဖျောက်ထားလိုက်ပါဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဘာကိုမှ သေချာမစဉ်းစားနိုင်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဘာကိုမှမပြောခင် စိတ်အရင်ငြိမ်အောင်ထားသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ငြိမ်အောင်မလုပ်ပဲ ဒေါသအလျောက်ပြောမိရင် တခြားသူကို အပြစ်ပြောမိတာမျိုး စိတ်ထိခိုက်အောင်ပြောမိတာမျိုးလည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဒေါသတွေကို အေးသွားအောင်ပြုလုပ်လိုက်ရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်တာတို့ ဟာသရုပ်ရှင်ကြည့်တာတို့ တရားထိုင်တာတို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့ အစရှိတာမျိုးလေးတွေလုပ်ပြီး စိတ်အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်က စိတ်အေးသွားပြီဆိုတော့မှ ကိုယ်ဒေါသဖြစ်ရတဲ့ ကိစ္စကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာလည်း တခြားသူရဲ့ အမြင်ဘက်ကနေပါ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။(၃) “လုံးဝ” တို့ “အမြဲတမ်း” တို့ အစရှိတဲ့ စာလုံးတွေကို ရှောင်ရှားပါနည်းလမ်းကျတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချဖို့အတွက်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကို သေချာစိစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒေါသအတွေးတွေက လွန်လွန်ကဲကဲတွေးခေါ်တာမျိုးတွေနဲ့ ခံစားချက်ပြင်းထန်တာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်က အမြဲတမ်းလွဲမှားနေတယ်တို့ ဘယ်တော့မှ အလုပ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေ တွေးမိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ကမ္ဘာကြီးရဲ့အဆုံးသတ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ကိုယ်က ဒေါသကို ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး သေချာစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။(၄) တခြားသူတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို နားလည်ပါတစ်ခါတစ်လေကျရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စိတ်တိုပြီး စကားများတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာ သူတို့တွေက ကိုယ့်ကို စိတ်တိုအောင်တမင်လုပ်တယ်လို့လည်း ထင်တတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းက မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံတာတော့မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်တွေက မရည်ရွယ်ပဲ ဒေါသနဲ့ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက တစ်ဖက်လူကို ထိခိုက်နာကျင်သွားစေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့သူက ကိုယ့်ကို တမင်ထိခိုက်နာကျင်အောင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။(၅) ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို တခြားသူကို အပြစ်မတင်ပဲ ဆွေးနွေးပါဆက်ဆံရေးတွေမှာ ပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကတော့ အကောင်းမြင်ပြီး တခြားသူတွေကို အပြစ်မတင်တာမျိုးပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အထင်အမြင်နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဆွေးနွေးပါ။ ကိုယ်က ဘယ်လိုကိစ္စတွေကြောင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရတာလဲ၊ ဒီအရာကို ဘာလို့လိုအပ်တာလဲအစရှိတာကို အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ သေသေချာချာပြောဆိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။(၆) တစ်ဖက်လူကို နားလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလူတွေက စိတ်တို ဒေါသထွက်လာတဲ့အခါကျရင် ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲ တွေးလာတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကမှန်ကြောင်းပြလို့ရမယ့်သက်သေတွေနဲ့ တစ်ဖက်လူက မှားနေကြောင်းပြောလို့ရမယ့် သက်သေတွေကိုပဲ စဉ်းစားလာတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာ ပြဿနာတစ်ခုကို မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီအတွေးတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။အရင်ဦးဆုံး ကိုယ့် စိတ်ရှုပ်ထွေးရတဲ့အကြောင်း ဒေါသထွက်ရတဲ့အကြောင်းကို အေးအေးဆေးဆေးပြောလိုက်ပါ။ ပြီးတော့မှ တစ်ဖက်လူကို သူတို့ အဲ့ဒီလို ပြုမူပြောဆိုရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို မေးလိုက်ပါ။နားလည်မှုလွဲတာတွေ အချင်းချင်းမကြည်မလင်ဖြစ်တာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ အချင်းချင်း အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံပြီး အပြန်အလှန် ခံစားချက်တွေကို နားလည်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်New Day Jobs ဆိုတာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ အလုပ်အကိုင်များကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ လျှောက်ထားနိုင်တဲ့ Website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များကို&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
5 Ways To Dramatically Improve Your Career
Khant Zaw HeinDigital Markeitng ExecutiveNew Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Career Advice Workplace Success Workplace Skill
How To Evaluate Yourself Effectively
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နေ့တိုင်း ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ?ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ အဓိကအကြောင်းဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုးတွေ ယုံကြည်ချက်တွေ အပြုအမူတွေနဲ့ စိတ်သဘောထားတွေကို သိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိနေဖို့ဆိုတာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ စိတ်နေသဘောထားတွေ အမူအကျင့်တွေ တုံပြန်မှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိအောင်လုပ်တာပါ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သုံးသတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။၁။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးတွေကို သိနားလည်ပါကိုယ့်ရဲ့ အတွေး၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေက ကိုယ့်ဘဝအတွက် အဓိကကျတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွေးတွေ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကနေ ခံစားချက်တွေ စိတ်နေသဘောထားတွေနဲ့ အခြေအနေတွေပေါ် နားလည်ပုံတွေကွဲပြားသွားနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းလေးတွေ ပြန်မေးကြည့်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေက အဆိုးဘက်ရောက်နေလား? ကိုယ်က မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးလို့ပဲ တွေးနေမိလား? အမြဲတမ်း တစ်ခုခုမှားတော့မယ်လို့ပဲ ထင်နေမိလား?၂။ ခံစားချက်ကို သိပါခံစားချက်တွေကနေ ကိုယ်ကဘယ်သူလဲ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ကိုယ်က ဘာလို့ ဒီလိုမျိုး ပြုမူတာလဲဆိုတာကို သိနိုင်လာပါတယ်။ ကိုယ်က ပြောဆိုနေတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ်မှာ ဘယ်လိုပြုမူတယ် ဘယ်လိုအသံအနေအထားနဲ့ ပြောဆိုတယ် ဘယ်လိုမျက်နှာအမူအယာနဲ့ ဘယ်လိုကိုယ်ဟန်အမူအယာရှိနေတယ်ဆိုတာကနေ ကိုယ်ရဲ့ ခံစားချက်ကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်က ဘယ်လိုမျိုး ခံစားနေရပြီး ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုမျိုးခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ရဲ့ ပြောဆိုပြုမူပုံတွေပေါ်မူတည်ပြီး သုံးသတ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ပေါ်လိုက်ပြီါ် ထင်မြင်ချက်တွေကလည်း ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ကိုယ်က တစ်စုံတစ်ခုကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါမှာ ထင်မြင်ချက်တွေ အတွေးထဲရောက်လာတတ်ပါတယ်။ တခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်မြင်တွေ့လိုက်ရတာပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ ထင်မြင်ချက်ကနေ မှားယွင်းတဲ့ သုံးသတ်ချက်တွေလည်းဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။၃။ ဒိုင်ယာရီရေးပါကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်းကို ဒိုင်ယာရီလိုမျိုး စာအုပ်ထဲမှာ ရေးတယ်ဆိုတာက ကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာရယ် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကိုယ်က သေချာသိနားလည်သွားနိုင်တယ်လေ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအကြောင်းကို ရေးတာကနေ ကိုယ်သတိမထားမိလိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေ အတွေ့အကြုံတွေကို သိလာနိုင်ပြီး အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေက ကိုယ့်ဘဝပေါ်ကို ဘယ်လိုမျိုး သက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိလာနိုင်ပါတယ်။၄။ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပါကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်းကို ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင် ကိုယ်ရေးထားတာလေးတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုပြန်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်က ဘယ်လိုအရာတွေမှာ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့ရတယ်နဲ့ ဘယ်အရာတွေကို ပြီးမြောက်အောင် မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာတွေကို သိရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်ခဲ့လား ရောက်ဖို့အတွက် ဘယ်လောက်လိုခဲ့လဲဆိုတာကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်နိုင်တယ်လေ။၅။ ကိုယ်အဓိကထားတဲ့အချက်ကို သိပါကိုယ်က ဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကို သိရင် ကိုယ့်ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ကို သိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာအများစုက ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံတွေ ပြောင်းလဲမှုတွေကနေ ရရှိခဲ့တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာက ဘာမှန်းမသိဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာဆိုတာက ဘဝမှာ ကိုယ်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရာတွေနဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေပါပဲ။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကို သိနားလည်လာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်က ဘယ်သူလဲ ကိုယ့်အတွက် ဘယ်အရာတွေက အရေးပါလဲဆိုတာကို သိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကနေ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို စဉ်းစားပြီး ကိုယ်ဘယ်လောက်အထိရောက်အောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။၆။ အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တာကို သတိရပါကိုယ်က ဘယ်လိုလူမျိုးဆိုတာကို သုံးသပ်ပြီးနားလည်ဖို့က အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ပြုမူတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး အနာဂတ်ဘဝက ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လေ။ အဲ့ဒီလိုမျိုး နားလည်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သုံးသပ်တော့မယ်ဆိုရင် အချိန်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနဲ့။ အချိန်ပေးတော့မှ ကိုယ်က သေချာစဉ်းစားပြီး သုံးသပ်နိုင်မှာလေ။ အဲ့ဒီလိုသုံးသပ်နိုင်တော့မှလဲ ကိုယ့်ရဲ့ ပန်းတိုင်ကို အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။New Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Workplace Success Workplace Skill Personal Upgrade
Nanda Win MyintDigital Marketing Executiveလုပ်ငန်းခွင်မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေရှိနိုင်သလို ပျော်စရာတွေလဲရှိ နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကတော့ စိတ်ညစ်စရာတွေပဲ အမြဲတွေ့နေရတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်ကို တစ်ယောက်တည်းလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ အောက်က နည်းလမ်းတွေကတော့ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။၁. သင်ကိုယ်တိုင်လဲ မှားနိုင်ပါတယ် ဆိုတာကို စိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားပါကျွန်တော်တို့ လူတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ပဲမှန်တယ် ကိုယ်နဲ့ မတူရင်သူမှားတယ် ဆိုပြီးတွေးတတ်ကျပါတယ်။ အဲဒီယူဆချက် က လူအများနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ သင့်ကိုဒုက္ခ ပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်နေ မတူညီတဲ့ နောက်ခံတွေကနေ လာတဲ့လူတွေစုနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိစ္စတစ်ခု အပေါ်ကို ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ အဲတော့ သင်ကိုယ်သင် အမြဲတမ်းမှန်နေတယ်ဆိုပြီး စိတ်ထဲမထည့်ထားပါနဲ့ လို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။၂. အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါဘယ်လောက်ပဲကိုယ်သဘော မကျတဲ့နေရာဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေပါစေ ကိုယ်ကအခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်း မရှိသေးဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်ဖြစ် သင့်လုပ်နိုင်သလောက်ကို အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ သင်လုပ်တာက လိုအပ်နေရင်တောင် အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတဲ့ အတွက် သင့်ကိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုတာကို ရရှနိုင်ပါတယ်။၃. ပြဿနာတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ ပြင်ပဘဝကို ယူမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် အလုပ်မှာ ပြဿနာတွေ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ၊မကျေနပ်စရာတွေနဲ့ အမှားတွေကို ကြုံရလေ့ရှိပါတယ်၊ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ပြီး သင်ယူပြီးသွားရင် သင့်ရဲ့နေ့စဉ် ဘဝထဲကို သယ်မသွားပါနဲ့၊ တကယ့် professional ကျတဲ့ သူတွေဟာ ဒီန့မကျေနပ်စရာ ကို နောက်နေ့ကို ယူသွားလေ့မရှိပါဘူး။၄. တခြားလူတွေအတွက်ပဲ အသက်မရှင်ပါနဲ့သင်ဟာ တစ်ဘဝမှာ တစ်ခါပဲ ရှင်သန်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်ဖို့အတွက် အရမ်းမကြိုးစားပါနဲ့ ၊ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲဟန်ဆောင်ပြီး မနေပါနဲ့၊ထိန်းချုပ်ရတာတွေအရမ်းများပြီး ပေါက်ကွဲထွက်ရင် ပိုဆိုးတတ်တဲ့အတွက် ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ မနေပါနဲ့လို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီအချက်လေးတွေကို ပြုပြင်နိုင်ရင်တော့ မနက်ဖြန်တွေမှာ သင်ဟာအရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။New Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်များစွာကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေလျှောက်ထားနိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များကို လျှောက်ထားနိုင်လိုပါက New Day Jobs မှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
What is Workplace Stress?
Khant Zaw HeinDigital Marketing ExecutiveNew Day Jobs ဆိုတာ အလုပ်အကိုင်ပေါင်းများစွာ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေ တွေ့နိုင်တဲ့ အလုပ်အကိုင် website ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်အကိုင်များ လျှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့&nbsp;New Day Jobs&nbsp;မှတဆင့် ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
Setting Goals That Work
Workplace Success Personal Upgrade
How To Stay Energized During Work From Home ...
Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveWork From Home မှာ ဘယ်လို တက်ကြွစွာ အလုပ်လုပ်မလဲ၊၁. အလုပ်မစခင်မှာ လမ်းလျှောက်ပါ။အလုပ်မစခင်မှာ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး လတ်ဆတ်တဲ့ လေကို ရှုရှိုက်တာက သင်တစ်နေကုန်အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် တက်ကြွမှုကို ပေးပါတယ်။အလုပ်မစခင် ငါးမိနစ်အလိုမှ ထပြီး အလုပ်စားပွဲမှာ ထိုင်တာထက် စောစောထပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာက တစ်နေ့လုံး လန်းဆန်းတက်ကြွနေဖို့ ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။၂. တစ်ဆက်တည်းထိုင်ပြီး အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့။ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ရင် တစ်နာရီတစ်ခါလောက် အိမ်သာသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ရေထသောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖြစ်ကြပေမယ့် အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ ထဖို့၊ထိုင်ဖို့ မေ့တတ်ကြပါတယ်။အဲ့တာကြောင့် တစ်နာရီတစ်ခါလောက် ရေထသောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဝါရန်တာထွက်ပြီး လေရှုတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အလုပ်စားပွဲမှာပဲ လုပ်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုလည်း ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။၃. အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာကို လင်းအောင်ထားပါ။နေခင်းဖက်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ သင့်အလုပ်စားပွဲက နေရောင်ခြည်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာ ဖြစ်ပါစေ။တကယ်လို့ ညဖက်မှာ အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းမီးဖွင့်ထားခြင်းက သင့်ကို နိုးနိုးကြားကြားရှိစေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၄. ရေများများသောက်ပါ။ကော်ဖီသောက်တာက သင့်ကို တခဏတော့ တက်ကြွစေမှာ မှန်ပေမယ့် အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ရေသောက်တာကတော့ သင့်ကို ပိုပြီး ကျန်းမာစေပြီး နိုးကြားစေမျာဖြစ်ပါတယ်။ရေဓာတ် ဆုံးရှုံးခြင်းက သင့်ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကျဆင်းစေတဲ့အတွ့် ဖြစ်နိုင်ရင် အလုပ်စားပွဲနားမှာ ရေဘူးဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။၅. အစာပြေစားပေးပါ။သင့်တစ်နေ့တာ အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းဖို့နဲ့ သကြား ဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညတ်တဲ့ အဆာပြေလေးတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။စားသင့်တဲ့ အဆာပြေတွေကတော့ :&nbsp;1. သစ်သီး၊အစေ့အဆံ2. Yogurt&nbsp;3. Crackers တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၆. လွယ်ကူတဲ့ အလုပ်တွေကို အရင်လုပ်ပါ။ခက်ခဲတဲ့တာဝန်တွေက သင့်ပင်ပန်းတဲ့အချိန်မှာ အာရုံစူးစိုက်လို့မရအောင် ဖြစ်ပစေပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လွယ်ကူတဲ့ တာဝန်တွေဖြစ်တဲ့ email ပြန်တဲ့၊ အချက်အလက်တွေ ဖြည့်တာမျိုးတွေကို အရင်လုပ်သင့်ပါတယ်။ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ တာတြန်လေးတွေကို ပြီးမြောက် နိုင်တယ်ဆိုရင် သင့်လည်းခွန်အားပြန်ပြည့်နိုင်ပါတယ်။၇. အမွေးနံသာ သုံးပါ။တကယ်လို့ သင်က အမွေးနံ့သာ ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင် အမွှေးပါတဲ့ ဖယောင်းတိုင် သို့မဟုတ် essential oil diffuser ကို သင့် စားပွဲမှာ ထားပေးပါ။အဲ့လို ထားပေးခြင်းဖြင့် သင့်စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ တက်ကြွလန်းဆန်းစေနိုင်ပါ့တယ်။New ...
How To Overcome Fear At Work
Khai Deih NeamDigital Marketing Executiveအလုပ်မှာ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ?&nbsp;ကြောက်ရွံ့မှုဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အန္တရာယ်တွေကို တုံ့ပြန်တာပါ။ အဲ့ဒီလို တုံ့ပြန်မှုက ကိုယ့်ကို သတိရှိစေပြီး အန္တရာယ်ကင်းစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အန္တရာယ်တွေကို တွေးပြီး ကြောက်ရွံ့မှုတွေ အရမ်းများသွားတဲ့အခါ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေအရမ်းများလာနိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ လျော့ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ကြောက်ရွံ့တွေကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတချို့ကို ပြောပြပေးမယ်နော်။(၁) ကြောက်ရွံ့မှုကိုနားလည်ပြီး ထွေးပွေ့လိုက်ပါကြောက်ရွံ့မှုတွေက ကိုယ့်ကို အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့အတွက် တည်ရှိနေတာပါ။ အဲ့ဒါက အရမ်းကြီးဆိုးတာလည်းမဟုတ်သလို အရမ်းကြီးကောင်းတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့အတွက်ကတော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ် ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာတွေကို နားလည်သွားရင် ကိုယ်လိုအပ်နေတာနဲ့ လိုချင်နေတာကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်ရွံ့မှုကို နည်းလမ်းအနေနဲ့ ထွေးပွေ့ထားလိုက်ပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကြောက်ရွံ့မှုတွေက ကိုယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အားအင်တွေလည်း ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တာတို့ ချရေးတာတို့လုပ်ပြီး ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။ ကိုယ်က ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို စိတ်ထဲ ထိန်းချုပ်ထားရင် ပိုပြီး ကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်က ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ရင်ဆိုင်လိုက်ရင်တော့ အဲ့ဒါတွေက သေးငယ်ပြီး ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။(၂) ပိုမိုသိနားလည်အောင်လုပ်ပါကိုယ်က ဘာမှမသိဘူးလို့ထင်ပြီးကြောက်နေရင် ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်က လုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိပ်နားမလည်ဘူးဆိုပြီး ကြောက်နေမယ့်အစား ကိုယ်သိချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေလေ့လာတာတို့ တခြားသူတွေကို မေးမြန်းပြီး လေ့လာသင်ယူတာတို့ လုပ်သင့်ပါတယ်။(၃) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုကို အသုံးချပါသူငယ်ချင်းတွေက တွန်းအားပေးတာကြောင့် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ အမြင့်ကနေ ခုန်ချတာတို့ လေထီးခုန်တာတို့ ရေအောက်ငုပ်တာတို့ လုပ်ဖူးပါသလား? တစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်က ကြောက်နေပေမယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ကြောက်နေတဲ့စိတ်ကနေ လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး လုပ်ကိုင်သွားနိုင်တာမျိုးရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ကို သတ္တိရှိအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်အောင် တွန်းအားပေးနိုင်မယ့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မျိုးနဲ့ ရှိနေတာကလည်း ကိုယ့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။(၄) အကူအညီယူပါကိုယ်က တစ်ယောက်တည်းလုပ်ကိုင်ရမှာမို့လို့ ကြောက်နေတာလား? အားကစားသမားတွေမှာ နည်းပြတွေရှိသလို ကျောင်းသားတွေမှာ ဆရာ၊ဆရာမတွေရှိသလိုပဲ ကိုယ့်ကို ဦးဆောင်လမ်းပြလုပ်ပေးနိုင်ပြီး ကူညီပေးနိုင်မယ့်သူကိုရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် သူငယ်ချင်းတွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီကနေ အကူအညီရနိုင်သလို အထက်လူကြီးဆီကနေလည်း နည်းလမ်းလေးတွေရနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သူတို့တွေက ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို မကြုံတွေ့ဖူးဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ့်ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ ပေးနိုင်ပါတယ်။(၅) အကောင်းမြင်စိတ်ထားပါကိုယ်က လုပ်ကိုင်ရမယ့်အရာကို ကြောက်နေတယ်ဆိုရင် ထင်ထားသလောက်အောင်မြင်မှုမရနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်က စတင်မလုပ်ခင်မှာ မလုပ်နိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာမျိုးကို တွေးနေတာမျိုးမလုပ်ပဲနဲ့ ကိုယ်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို စဉ်းစားလိုက်ပါ။ အဲ့ဒီလိုမစဉ်းစားခင်မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို အကောင်းမြင်စိတ်ဖြစ်အောင် အရင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေက အောင်မြင်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ တခြားသူတွေက လက်လျော့အရှုံးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေက လုပ်နိုင်တယ်လို့ပဲ တွေးထားပြီး ကြိုးစားနေကြတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။(၆) အကြောင်းအရင်းကို ရှာပါတစ်ခါတစ်လေကျရင် ကိုယ်လုပ်ကိုင်တာ အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါ မအောင်မြင်တဲ့အခါ လက်လျော့ချင်တဲ့စိတ်မျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်က အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ လက်မလျော့ပဲနဲ့ သေချာကြိုးစားကြည့်သင့်ပါတယ်။ “ပထမဆုံးအကြိမ်မအောင်မြင်ရင် ကြိုးစားပြီးရင်း ကြိုးစားပါ” ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် “လုပ်တဲ့အရာကို အဲ့ဒီအတိုင်း ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေပြီး မတူညီတဲ့ ရလဒ်ကို မျှော်မှန်းတာက ရူးသွပ်တာ” ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာက မအောင်မြင်လို့ တခြားအရာလုပ်ရမှာ ကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံးလုပ်သင့်တာက ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာက ဘယ်အချက်ကြောင့်မအောင်မြင်ရတာလဲဆိုတာကို အရင်သိအောင်လုပ်ပါ။ အဲ့ဒါပြီးတော့မှ ကိုယ်လုပ်မယ့်အရာကို ဘယ်လိုမျိုးကောင်းအောင်လုပ်မလဲဆိုပြီး စဉ်းစားပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။New Day Jobs ဆိုတာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ အလုပ်အကိုင်များကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရှာဖွေနိုင်တဲ့ website ဖြစ်ပါတယ်။ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်အကိုင်များကို New Day Jobs မှာ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
Workplace Success Workplace Skill
Ways To Get Back To Work After Thingyan
Khai Deih NeamDigital Marketing Executiveသင်္ကြန်ပိတ်ရက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်ဝင်ဖို့ Work From Home လုပ်ရတဲ့အခါပဲ ဖြစ်ဖြစ် တကယ်ရုံးကိုတက်ရတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခက်ခဲတက်ပါတယ်။ပိတ်ရက်မှာ နောက်ကျမှ ထခဲ့သလို ရုံးပြန်ဖွင့်တော့လည်း ထချင်တဲ့ပြဿနာလေးတွေရှိနေမယ်။ပိတ်ရက်တွေအတိုင်း နေ့ခင်းနေ့လည်ဆို တစ်ရေးတမော အိပ်ချင်နေမယ် ဆိုရင် အခု အဲ့လိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၁။ သင့်လစ်ဟင်းသွားတဲ့ အလုပ်တွေကို တချိန်ထဲမှာ လုပ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ပိတ်ရက်တွေ ပြီးလို့ ရုံးစဖွင့်တဲ့နေမှာ ရာချီတဲ့ အလုပ်တွေကို သင့်ကို စောင့်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် အဲ့မပြီးသေးတဲ့အလုပ်တွေကို တစ်နေ့တည်းနဲ့ အပြီးသတ်လုပ်ဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။အဲ့လိုအပြီးသတ် လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ့် Pressure တွေက သင့်အလုပ်ပြီးဖို့ ကြန့်ကြာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။သင်လုပ်ရမယ့် အလုပ်ထဲက အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေကို ဦးစားပေးပြီး အရင်လုပ်ပါ။ပြီးမှ ကျန်တဲ့ အလုပ်အသေးတွေကို တစ်ခုချင်း ဖြိုပေါ့။၂။ သင့်ရဲ့ အလုပ်ဇယားအတိုင်းသွားပါ။ဥပမာ - သင့်က ရုံးရောက်ရောက်ချင်း ဖုန်းခေါ်တာမျိုး လုပ်လေ့ရှိတယ် သို့မဟုတ် email စစ်တာမျိုးလုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် အဲ့ဇယားအတိုင်းပဲ လုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ သင့် ကော်ဖီ break ယူတာကို မယူပဲ အလုပ်တွေကို ကြိုးစားလုပ်နေတာ နေ့လည်စာတောင်မစားပဲ သင့်အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေတာမျိုးဆိုရင် သင့်ရဲ့ Productivity ကို လျှော့ကျစေနိုင်တဲ့အတွက် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ လုပ်သင့်ပါတယ်။၃။ သင့် Email inbox ကို ရှင်းလင်းပါ။သင့် email ...
How To Balance Family-At-Home and Work-From-Home
-[Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveWork life balance ဆိုတာက လုပ်ငန်းခွင်က လူတိုင်းအတွက် ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။Work ကော&nbsp;Life ကော အရေးကြီးပြီး နှစ်ခုလုံးက ကျွန်တော်တို့အတွက် အချိန်ကုန်တဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ သင်က ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ work တစ်ခုတည်းကိုပဲ အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။သို့ပေမယ့် အိမ်မှာ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အိမ်မှာ မိသားစုရှိတဲ့အတွက် အလုပ်တစ်ခုတည်း အာရုံနှစ်ထားဖို့က မလွယ်ကူပါဘူး။အဲ့တာကြောင့် အဲ့အခက်အခဲတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ သင့်အနေနဲ့ လိုက်နာရမယ့်အချက်တွေက ရှိနေပါတယ်။၁။ အခြေခံစည်းကမ်းချက်လေးတွေကို ချမှတ်ပြီးလိုက်နာပါအခုတလော COVID - 19 ကြောင့် အလုပ်တွေကို work from home လုပ်ကြရပါတယ်။အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ တစ်ကိုယ်တည်းနေတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပေမယ့် မိသားစုနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအတွက် ကတော့ အနှောင့်အယှက်တွေနဲ့ အလုပ်တွေ ရှေ့မရောက်ပဲ ပြီးသင့်သလောက်မပြီး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။...
Useful Digital Toolkits For Remote
Khai Deih NeamDigital Marketing ExecutiveCorona Virus ကြောင့် ဝန်ထမ်းအများစုက work from home လုပ်ကြရပါတယ်။လုပ်ငန်းရှင်အများစုကလည်း သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို work from home လုပ်ခိုင်းရတဲ့အတွက် အလုပ်မပြီးမှာ ပြီးတော့ အလုပ်တွေ နှောင့်နှေးမှာကို စိုးရိမ်ကြပါတယ်။အဲ့လို စိုးရိမ်မှုတွေ မဖြစ်ရအောင် အလုပ်တွင်ကျယ်စေမယ့် tool kit တွေကို အသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ tool kit တွေကတော့ ...